२०७७ सालमा यी ५ राशीवालाको खुल्ने छ नसोचेको भाग्य ! सक्दो सेयर गरौ – Butwal Sandesh
२०७७ सालमा यी ५ राशीवालाको खुल्ने छ नसोचेको भाग्य ! सक्दो सेयर गरौ
यी राशिहरू हुनेहरुका लागि यो साल निक्कै फलावन रहेको छ । यो समय नयाँ काममा सफलता मिल्ने नयाँ कम गर्ने जोस जागर बढ्ने समय रहेको छ । भाग्य स्थानमा रहेर वृहस्पति गएर बसेको छ । सन्तानबाट पूर्ण साथ सहयोग पाउनेछ । शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रै रहेको छ ।वैदेशिक यात्राको समेत योग रहेको छ । मन निक्कै प्रसन्न रहनुका साथै शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सकिनेछ ।
यी राशि हुनेहरुको लागि दाम्पत्य जीवनमा ठुलो सुख प्राप्त गर्नुका साथी घर परिवारको पूर्ण साथ प्राप्त हुनेछ । प्रेम गर्ने जोडीहरूको लागि यो वर्ष निक्कै उत्तम रहेको छ । त्यस्तै व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्नेछ । धार्मिक यात्रा हुनेछ । मनोबल उच्च रहनुको साथै मनमा क्रान्ति छाउने छ ।
३. कन्या राशि
यी राशि हुनेको लागि सन्तानबाट ठुलो साथ र सहयोग पाइनेछ । सरकारी सेवामा भएकाहरूलाई मान सम्मानमा पाइनेछ । रिजल्टको पर्खाइमा हुनु हुन्छ भने १०० % राम्रो नतिजा आउनेछ । शैक्षिक क्षेत्रबाट ठुलो प्रगति हुनेछ ।
यी राशि साढे शनिसाती भएता पनि मनमा डर उदासी छाए पनि भाग्य उदय हुनेछ । अर्को भाग्यमानी राशिमा धनु राशि पनि पर्छ । यो राशि हुने व्यक्ति धेरै मेहनती र क्रान्तिकारी स्वभावका हुन्छन् । यी राशि हुनेले पनि धेरै सफलता प्राप्त गर्दछन् । लामो समय देखि रोकिरहेको कामहरू बन्नेछ ।
५. मीन राशि
यी राशि हुनेहरुको लागि यो वर्ष निक्कै फलदायी रहनेछ । शैक्षिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय फस्टाउने छ । सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ ।